माग्ने बुढाकी श्रीमती अचानक मिडीयामा ? भद्रगोल पछी सक्किगोनी खेल्दा जिग्री,पाडे र बले को रमाइलो ? (भिडियो हेर्नुस) – Khabar Silo
लोकप्रिय हास्य कलाकार केदार घिमिरे उर्फ माग्ने बुढा २०५८ सालदेखि कलाकारिता शुरु गरेका केदार २०३२ सालमा जन्मिएका हुन्। ‘हिजो आजका कुरा’बाट अभिनय यात्र सुरू गरेका उनले ‘गीताञ्जली’, ‘तितो सत्य’, ‘लोकलहरी’, ‘जिरे खुर्सानी’ हुदै ‘मेरी बाँस्सै’मा आदिमा काम गरेका छन्। हँसाएर दुनियाँको मन जितेका माग्ने बुढाको जीवन संघर्षपूर्ण रह्यो। माग्ने बुढाको पुख्र्यौली थलो ललितपुरको प्युटार हो। उनी भने मकवानपुर ठिंगनको सिमातमा जन्मेका हुन्।
विवाह अघि घिमिरेले घरमा रंग लगाउने, टेम्प चलाउने, फुटपाथमा पसल गर्ने तथा इलेक्ट्रोनिक सामान आदि बच्ने काम गर्थे। तितो सत्य तथा जिरे खोर्सानीमा काम गरेका केदारले चर्चा भने २०६२ सालमा सुरू भएको ‘मेरी बास्सै’मा गरेको ‘माग्ने बुढा’को भूमिकाबाट पाए। ‘मेरी बास्सै’बाट छुट्टिनु अघि उनले अर्का हाँस्य कलाकार सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’सँग जोडी बनाएका थिए। सिताराम पछि उनले ‘तोक्मे बुढा’सँग जोडी बाँधेर स्टेजमा प्रस्तुति दिने गरेका छन्। भिडियो हेर्नुस
हास्य अभिनेत्रीका रुपमा स्थापित कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) २८ वर्षको उमेरमा आएर चलचित्रको अभिनेत्री बन्ने सपना साकार भएकोमा दंग छिन्। हास्य श्रृंखला मेरी बास्सैमा विभिन्न चरित्र निर्वाच गरेर दर्शकको मन जिते पनि उनले चलचित्रमा भने हालसम्म अभिनेत्रीका रुपमा अभिनय गर्ने मौका पाएकी थिइनन्। आजको साप्ताहिकका अनुसार यद्यपी उनले अभिनय यात्रा प्रारम्भ गर्दा चलचित्रको अभिनेत्री बन्नेब लक्ष्य […]
Posted on September 4, 2021 Author khabar silo
काठमाडौं । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर अहिले फिल्म सँगै व्यापारमा समेत सक्रिय भएकी छिन् । समाज सेवा, फोटोसुट र अन्य व्यवसायिक गति विधिमा उनको सक्रियता लोभ लाग्दो छ । यसैसाता करिश्माले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड इन्टेक्सलाई नेपाल भित्राउँदै व्यापार व्यवसायमा समेत हात हालेकी छिन् ।योसँगै करिश्माको व्यस्तता अहिले पठनपाठनमा पनि छ । उनी अहिले भदौ ३० गतेदेखि सुरु […]
लता मंगेशकरले आफ्नो छायाँ नबन्न दिएको सुझावमा रानु मण्डलले दिइन् जवाफ